Regular Expression (စကာလုံးအစုပုံစံ)
(Introduction of Regular Expression)
စကားလုံးအစုပုံစံ (Regular Expression) တစ်ခုဆိုတာ (ကွန်ပြူတာလောက အသုံးအနှုန်းအားဖြင့််) string အမျိုးအစားမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုံစံ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း စကာလုံး (character) တွေကို ရှာဖွေဖို့ ၊ စကားလုံးအစု (a set of characters)တစ်ခုနဲ့အခြား စကားလုံးအစု တို့ ကို တိုင်ဆိုင် စစ်ဆေးချင်တဲ့ အခါမျိုး၊ အဲဒီလို အခါတွေမှာ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
တကိုယ်ရေသုံးကွန်ပြုတာတွေကို သုံးဖူးတဲ့သူတွေ ဆိုရင်ပဲ ဒီ စကာလုံးအစုပုံစံ (Regular Expression) ကို သုံးဖူးကြမှာပါ။ စကားလုံးအစုပုံစံကိုသုံးနေတယ်လို့သိချင်မှတော့ သိပါမယ်။ ဥပမာ- ဖိုင်တွေကို ရှာဖွေချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာပေါ့။ ဖိုင်နာမည် data နဲ့စတဲ့ ဖိုင်အားလုံးကို ရှာချင်တယ်ဆိုပါတော့။
စက်ထဲမှာ က -
၁. data.doc ၊
၂. data1.doc ၊
၃. data2.doc ၊
၄. dataTXT.txt ၊
၅. dataEXE.exe ၊
ဆိုပြီးရှိမယ်လို့ ယူဆကြမယ်။ ဒါဆို ရှာဖွေတဲအခါ data*.doc ဆိုးပြီးရိုက် ထည့်လိုက်။ ပြီးလို့search ဆိုတဲ့ button လေးကို နှိပ်လိုက်ရင် ခုနက အပေါ်ဆုံးဖိုင် ၃ ဖိုင်ကို ကွန်ပြုတာ စီမံခန့် ခွဲရေးစနှစ် (Operating System - OS) က ရှာပေးပါလိမ်မယ်။ တကယ်လို့data?.* လို့ ရိုက်ထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ၂ ၊ ၃ နဲ့၆ တိုကို ရှာပေးပါ လိမ့်မယ်။ data*.* ဆိုရင်တော့ ၆ ဖိုင်လုံးပေါ့။
wildcard characters တွေလို့ ခေါ်ခဲ့ ကြတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတွေပေါ့။ အခုပြောမယ့် စကားလုံးအစုပုံစံ မှာက ဒီထက်အများကြီး ကျယ်ပြန့် ပါတယ်။ အနည်းငယ်လည်း ခတ်မယ်။ wildcard characters တွေက အတော်အသုံးကျပေ့မယ်လို့အကန့့်အသတ် ရှိတယ်။ သူတို့ တွေဟာ စကားလုံးပုံအစုပုံစံ (Regular Expression) ရဲ့သဘောတရား ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
စကားလုံးအစုပုံစံရဲ့မူလဇစ်မြစ်ဟာ သီဝရီသဘောတရားဆိုင်ရာကွန်ပြုတာသိပံ္ပ (theoretical computer science) ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ automata theory နဲ့formal language theory တို့ ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ စကားလုံးအစုပုံစံ ကို formal language theory နဲ့ဖော်ပြရေးသားရပါတယ်။ (လေ့လာလိုသူများ ဆက်ပြီးလေ့လာကြပါ။ ဒီကြောင်း တွေက ဒီပိုစ်နဲ့ မဆိုင်ပါ။)
စကားလုံးအစုပုံစံ (Regular Expression) ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်
- အချက်အလက် မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးခြင်းများ (Data Validation & Verification)
ဥပမာ - ၀င်ရောက်လာတဲ့ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် က ကိုယ်လိုချင်တဲ့ စံပုံစံ (pattern) ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးခြင်း ၊ လိုချင်တဲ့ ပုံစံက ၉၀a-၃၄-၅d-၃ ဆိုပါတော့၊ အဲဒီပုံစံမဟုတ်ပဲ ၉၀3၅၅-၅%၇၅၄ ဆိုရင် စံပုံစံ (pattern) အားဖြင့် မှားတယ်။
- စာများ အစားထိုးခြင်း (Replace Text)
ဥပမာ - I love you very much. No matter what you are, I love you. ပေါ့။ဒီလို စာတွေ စာရွက်ပေါင်း များစွာရှိမယ်ဗျာ။ ဒါကို (နှစ်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါ) love အစား hate နဲ့ အစားထိုးချင်တယ် ဆိုပါတော့။အဲဒီလို အချိန်မှာ သိပ်အသုံးကျတယ်။
- စာအစဉ်အတန်း (String) တစ်ခုထဲကနေ ကိုယ်လို ချင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်း လေးတစ်ခုကိုပဲ ထုတ်ယူခြင်း (Extract text)
ဥပမာ - အပေါ်က စာထဲကပဲ love ဆို တဲ့ စာလုံးကိုပဲ ထုတ်ယူချင်တဲ့အခါမျိုး။
စသည်တို့ တွေမှာ အလွန် အသုံးဝင်ပါတယ်။
ရည်ညွန်း။ ။ MSDN, Wikipedia - the free encyclopedia
မှတ်ချက်။ ။ ပိုစ်တွေကို ကျွန်တော် စာလုံးများကို တက်နိုင်သလောက် မြန်မာမှုပြုထာပါတယ်။ ပညာရှင်မဟုတ်တဲ့ အတွက် စာလုံးတွေက ထောက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရေးနေရင်းနဲ့ခဏခဏရယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေ့မယ်ပေါ့လေ တက်နိုင်သမျှတော့ ကြိုးစားပြီးမြန်မာ လို ပဲရေးပါမယ်။ အခုအစပြုမိရင် နောင်ကျတော့ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်စုံတဲ့ မြန်မာစာလုံးတွေ ထွက်လာနိုင်တယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by akela at 9:41 PM